केही गर्छु भन्नेले कहिल्यै भ्रष्टाचार गर्दैन : अध्यक्ष राई::समायोजन खबर
केही गर्छु भन्नेले कहिल्यै भ्रष्टाचार गर्दैन : अध्यक्ष राई
केपिलासगढी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णकुमार राई ।
केपिलासगढी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि २८ करोड २४ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।गाउँपालिकाबाट आन्तरिक संकलन प्रक्षेपण १२ लाख अनुमान गरेको छ । नयाँ बजेट विनियोजन पश्चात गाउँपालिकाको समग्र बारेमा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईसँग समायोजन खबर डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।
आफ्नै भवन छैन,कार्यालयले प्रवाह गर्ने काम कारबाही कस्तो भइरहेको छ ?
कार्यालयको काम राम्रै छ । आफ्नै भवन नहुंदा समस्या त छ । हामीसँग आफ्नै भवन छैन । अहिले हामी पूरनो वडा कार्यालयको भवन र विधालयको तीन वटा भवन प्रयोग गरिरहेका छौ । कार्यालयको काम कारबाही ठिकै छ । कार्यालय भवन र कर्मचारी समायोजनको समस्या लगायतले गर्दा काम गर्न चाँहि केही जटिल नै छ ।
हालसम्म आईपुग्दा गाउँपालिकाले विकासमा कती फड्को मा-र्यो ? प्रमाणहरु के–के हुन् ?
विकासले फड्को मारेकै छ । हाम्रो मात्रै स्थानीय तह भन्दिन स्थानीय तह लागू भएपछि सिंहदरवारको सवै अधिकार गाउँगाउँमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि विकासमा फड्को मारेको छ । र, विकासमा एक किसिमको मुहार फेरेको छ, केपिलासगढी गाउँपालिकाले ।
हाम्रो गाउँपालिकाको हकमा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विधुत लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो फड्को मारेको छ । हाम्रो दुइ वर्षे कार्यकालमा विकासले एक किसिमको नयाँ गन्तब्य बनाएको छ । गाउँपालिकावासीले पनि त्यो अनुभूती गरेका छन् ।
विकासका सुचकहरु विधुत, सडक, खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य हुन् । यि क्षेत्रमा के,कस्ता प्रगती भए ?
प्रत्येक वडामा कच्ची सडक पुगेको छ । विस्तार हुने क्रम पनि जारी छ । ति मध्येमा सुङदेल र फेदीमा विस्तार हुने क्रममा छ । अन्यमा मोटामोटी सडकको पहुंच पुगेको छ । सडकको स्तरोन्नती र गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिएको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका मुख्यमुख्य सडकहरु बर्खामा पनि चल्ने अवस्थामा छन् ।
“स्थानीय तहमा प्रायः भ्रष्टाचार नै हुन्न । यदाकदा भ्रष्टाचार गर्ने भनेको जीउछाडाले मात्रै गर्छ । जनताको लागि केही गर्छु, केही छाप छोडेर जान्छु भन्ने भावना भएकाले कहिल्यै भ्रष्टाचार गर्दैन ।”
शिक्षा क्षेत्रमा अत्यन्तै राम्रो प्रगती छ । प्रत्येक वडालाई नमूना वडा विधालय बनाउने उद्देश्यले क्रमागत रुपमा बजेट दिईरहेका छौ । सातै माविमा ईन्टरनेट जडान गरेका छौ । गाउँपालिका निर्माण भएर हामीले अनुगमन गरेपछि शिक्षकहरुमा पनि पढाउनुपर्ने रहेछ, हामीले नपढाए विधार्थीको भविष्य डामाडोल हुने रहेछ भन्ने उहाँहरुमा छाप परेको बुझेको छु । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि रामै छ । प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा औषधी खरिद गरिदियौं । दुईवटा स्वास्थ्य चौकीमा भिडियो एक्सरे मेसिन राखेका छौ । सातै स्वास्थ्य चौकीमा वर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरी २४ घण्टे अनमीको व्यवस्था गरेका छौ । अनमीहरुलाई यसपालि पनि क्रमागतमा राखेका छौ ।
विधुतमा यसवर्ष उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । काठे पोलहरुलाई फलामे पोल फेर्ने क्रमागत कार्यक्रम छ । फलामे पोलहरु आइसकेको पनि छ । गाउँपालिकाको कुनाकन्दारमा विजुलीको पहुंच पुगेको छ । स्थानीय तह आउनुभन्दा अगाडी बाक्सिलाबजारमा खानेपानी टाढा टाढाबाट बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । हप्तामा एक दिन पानी बनाउन जानुपर्ने समस्या थियो । तर, अहिले गाउँपालिकाको पहलमा दुईवटा पानीको मुहान जोडेपछि हिउद, बर्खानै खानेपानी सुचारु भइरहेको छ । र, अन्य स्थानहरुमा पनि खानेपानीलाई प्राथमिकिकरणमा राखेर खानेपानीको मर्मतदेखी समस्या भएको ठाउँमा ट्याङकी बनाउने, महुान खोजेर पानीको व्यवस्था गरेका छौ ।
हामीले कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौ । गाउँपालिकाको कृषिलाई व्यावसायी मूलक बनाउने योजनामा छौ । सिजन र ठाउँ अनुसार कुनकुन खेती हुने भन्ने वारे अध्ययनगरी स्थानहरुको सम्भाव्यता खोजीगरी किसानहरुलाई सहयोग गर्ने, कृषकका फर्महरुलाई स्तरोन्नी गर्ने र नमूना कृषि फर्म तयार गर्ने भिजनमा छौ । गाउँपालिकाभरी अहिले युरिया मल र विषाक्त औषधिहरु प्रयोग गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएका छौ । कृषकलाई पाईप, बिउ, बिजन, गोठेमल सुधारका कामहरु अगाडी बढाएका छौ । कृषिमा तत्कालै अर्गानिक गाउँपालिका बनाउने योजनामा छौ । समग्रमा भन्नुपर्दा विकासका सुचकहरुलाई गाउँपलिकाले राम्रो लिड गरेको छ ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, अनियमित्ता, पार्टी निकटलाई योजना वितरणजस्ता विषयहरु व्यापक चर्चामा छन् । यहाँ कस्तो छ ?
भ्रष्टाचार भन्ने कुरा हाम्रो गाउँपालिकामा छैन । सवै स्थानीय तहमा त्यस्तो भ्रष्टाचार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विगतमा जती भ्रष्टाचार हुन्थ्यो त्यो कुरालाई छोडेर अहिले स्थानीय तहमा आँखा गएको छ । भ्रष्टाचार भनेकोे शुन्य सहनशील हो हाम्रो गाउँपालिकामा । कुनै योजना तथा कामहरुमा भ्रष्टाचार भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । काम भएको छ । इन्जिनियरले दिएको स्टामेट अनुसार काम भएको छ । अनुगमन समितिले सत्यतथ्य रिपोर्ट लिएको छ । स्थानीय तहमा प्रायः भ्रष्टाचार नै हुन्न । यदाकदा भ्रष्टाचार गर्ने भनेको जीउछाडाले मात्रै गर्छ । जनताको लागि केही गर्छु, केही छाप छोडेर जान्छु भन्ने भावना भएकाले कहिल्यै भ्रष्टाचार गर्दैन ।
गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी प्राथमिकता केमा रहेको छ ?
गाउँपालिकाको हालसम्मको स्थिती हेर्दाखेरी प्राथमिकतामा परेको पूर्वाधार नै हो । पूर्वाधार आवश्यक पनि रहेछ । सडक, विधुत, भवनहरु छैन भने, अन्य कामले अर्थ नराख्ने रहेछ । त्यस कारणले धेरै योजनाहरु पूर्वाधार अन्तरगतका छन् । तर, सडकको अवस्थामा चाँहि जताततै सडक खन्ने र ति सडकहरु काम नलाग्ने पनि देखिन्छ । काम नलाग्ने त्यस्ता सडक अहिलेका पनि छन्, पहिलाका पनि । त्यसैले हाम्रो गाउँपालिकाको हकमा भन्ने हो भने भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । जति आवश्यक हो ।
मैले सुन्दा र बुझ्दा जनताहरु खुशी नै छन् । कतीपय उहाँहरुको सवै मागहरु पूरा गर्न पनि सकिन्दैन । अलिअलि दुखेका पनि छन् । किन भने, उहाँहरुले स,साना योजनाहरु माग्नु हुन्छ । सानो समुहलाई समेट्ने योजनाहरु माग्नुहुन्छ । योजना प्राथमिकिकरणमा हामीले योजनाले ठूलो क्षेत्रलाई समेटियोस, त्यसको लाभग्राहीहरु धेरै संख्यामा होस भन्ने कोणले छुट्याइएको हुन्छ । र, पनि त्यस्तो खालको धेरै गुनासो गर्ने, दुःख गर्नेहरुलाई सम्झाएपछि, बुझाएपछि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामले यो किसिमले योजना वितरण गरेका हौ । परेन तपाईहरु दुःख नमान्नुस, विस्तारै क्रमागत रुपमा हुन्छ भनेपछि उहाँहरु मान्नु भएको छ । जनताहरु सन्तुष्ट छन् ।
तपाईहरुको कार्यकाल अवधिमा गाउँपालिकावासीले के अपेक्षा गर्ने ?
हाम्रो कार्यकाल अवधिमा मुख्यमुख्य गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास नैै हुन्छ । क्षतविक्षत भएको यहाँको गाउँठाउँ, साविकका गाविसहरुलाई हामीले सम्हाल्नु परेको छ । र, उहाँहरुले सवैखाले अपेक्षा राखे पनि गाउँपालिकालाई हाम्रो कार्यकालमा एउटा राम्रो गती, दिशानिर्देश गरेर गइयो भने उहाँहरुले राम्रो मान्नुपर्छ । धेरै विकासका कुराहरु, धेरै संम्भावनाहरु आर्थिकका कुरासँग जोडिएका हुन्छन् । आर्थिक भए हामीले पनि बनाउन सकिन्थ्यो । हामीसँग आर्थिक समस्याको कारणले भनेजस्तो काम नगरे पनि जनता सन्तुष्टि हुनुपर्छ । यो कार्यकाललाई एक किसिमको गती दिएपछि अर्को आउने व्यक्तिहरुले पनि त्यही लय समातेर जानुभयो भने लगभग १० वर्ष, वढीमा १५ वर्षमा समुन्नत गाउँपालिका बन्छ ।
काम गर्नलाई अप्ठ्यारा र चुनौतीहरु के–के छन् ?
अफ्ठ्यारा र चुनौतीहरु धेरै छन् । भनेजस्तो कर्मचारी नहुनु, गाउँपालिकाको भवन नहुनु, सङघीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट बिनियोजन भएको बजेटहरु कटौती हुनु, कर्मचारी समायोजनले काम गर्न ढिलासुस्ती हुनु, गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्र तथा प्रदेशले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु जस्ता समस्याहरु यथावत छन् । त्यसले गर्दा काम गर्नमा समस्या छन् । तर, पनि जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरु बिहान १० वजेदेखी साँझ ७/८ वजेसम्म काम गरिरहेका छौ । सेवा दिइरहेका छौ । सम्बन्धितहरुले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटले केकेलाई प्राथमकिता दिएको छ ?
बजेटको प्राथमिकता भनेको पूरानो योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने नै हो । जस्तो हाम्रो गाउँपालिकाको नयाँ भवन बन्दैछ, पक्की पुल बन्दैछ, बाक्सिला–बोबु, सुङदेल–सालपा सडकलाई प्राथमकितामा राखेको छ । विशेष गरेर पूराना योजनालाई सम्पन्न गर्ने र योजना ल्याउँदा जनतालाई अत्याधिक लाभ पुग्ने योजनाहरु मात्रै प्राथमिकतामा परेको छ । सानातिना योजनामा गाउँपालिकाले त्यस्तो खाले बजेटहरु बिनियोजन गरेको छैन । प्रस्तुती चिसाङ शेर्पा
२०७६ असार १२ गते बिहान ११ : ५२ मा प्रकाशित